KALANCHOE PINNATE: SHARAXAAD, BEERITAANKA, DARYEELKA, TARANTA - SOOSAARKA DALAGGA
Kalanchoe waa warshad ay jecel yihiin dad badan sababtoo ah waa qurux iyo faa'iido leh. Haddii aad rabto in aad aragto ubax sidan oo kale ah, waxaad u baahan tahay inaad barato qaar ka mid ah sifooyinka koraya iyo daryeesha iyaga.
Kalanchoe Pinnate: sharaxaad warshad waxtar leh
Kalanchoe Pinnate sidoo kale leedahay magaca daawada, ubaxu, si cirro leh - waa ubax dilka ah oo ka soo qoyska ee caleemo qaro weyn.
Qiyaastii 200 noocyo. Asal ahaan wuxuu ku koray Madagascar, maantana wuxuu ku koraa gobollada inteeda badan ee kuleylka ah ee Ameerika, Aasiya iyo Afrika. Laakiin sidoo kale Kalanchoe waa koray ubax guri sababtoo ah tayada daawada iyo qurxinta.
Dhirta kale ayaa sidoo kale leh hanti daweynaya, sida medunitsa, rosemary, lakonos, macmacaan, cashweed, cad, duurjoogta duurjoogta ah, dhiiqada, lakabada, dabka, iyo hilibka dufanka leh.
Waxay leedahay saameyn liddi ku ah antideptic, antiseptic iyo dhaawaca bogsashada.
Ma taqaanaa? Soodhaha Plant waxaa loo isticmaalaa daaweynta hargabka.
Shuruudaha koritaanka kalanchoe
Kalanchoe waa warshad aan u baahnayn xaalado gaar ah oo xabsi ah. Kaliya u baahan tahay si taxaddar leh oo taxadar leh ee ciidda, si aanay u waxyeeleynin xididada, waraabinta, dharka ugu sareeya ee digaagga leh nitrogen ee ka bacriminta ama isticmaal dharka sare ee cacti.
Heerkulka ugu fiican iyo qoyaanka
Ubaxa wuxuu jecel yahay qoyaan waana thermophilic, sababtoo ah tan, heerkulka marka la koro waa in aysan jirin wax ka yar 10 ° C, haddii kale dhirta ayaa jirran karta.
Xilliga jiilaalka, heerkulka ugu fiicani wuxuu noqon karaa 16 illaa 18 ° C, iyo xagaaga - laga bilaabo 18 illaa 22 ° C, iyo dhibco fara badan lama ogola.
Laakiin weli way u adkeysan kartaa heerkulka ka sareeya 30 ° C iyo hawada qallalan ee aqalka.
Waa muhiim! Warshadu way ka cabsanaysaa kuleylka hogaaminaya, sidaas awgeed waa in laga fogaadaa qalabka kuleylka. Biyaha jiilaalka 2 ama 1 mar bishiiba.
Waa maxay nooca iftiinka aad u baahan tahay feathery Kalanchoe?
Kalanchoe, ubaxyada daaqadaha, waxaad u baahan tahay iftiin fiican, laakiin waa inaad iska ilaalisaa qoraxda habeenkii. Waxaa fiican in la dhigo ubax galbeedka ama daaqada bari. Ka dib markii ubax, waa inay ahaataa hooska laba bilood.
Waa muhiim! Ku dhajinta dhirta mugdiga dhamaystiran maaha mid u qalantaa - waxay keeni kartaa dhimashadiisa.
Caano si ay u koraan Kalanchoe Pinnate
Waa maxay ciidda loo baahan yahay Kalanchoe iyo dhererka dhirta ay tahay in la beero waa su'aalaha muhiimka ah, jawaabaha kuwaas oo kaa caawin doona inaad koraan warshad caafimaad leh oo qurux badan. Ciidda lagama maarmaanka u ah ubaxku wuxuu leeyahay dhexdhexaad ama daciif ahaan, wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood - waa ciid (oo doorbidayaa webiga), humus iyo caleen caleen, waa qiimo isku dhafan oo is le'eg. Laakiin waxaad iibsan kartaa isku dar ah habka suuqa ama dukaanka.
Waxaa lagu talinayaa in lagu daro dhuxul yar oo la jajabiyey dhuxul iyo boodh ay carro u yihiin carrada - tani waxay hayn doontaa qoyaanka muddo dheer. Dhinaca hoose waa inay noqdaan dheecaan dhoobo leh, dhagaxyada, iwm. Waa inay jiraan faraq u dhexeeya dheriga iyo saxaarada aan u oggolaan doonin biyaha inay istaagaan.
Waa muhiim! Ubaxa uma dulqaadanayo biyaha joogtada ah - tani waxay keeneysaa in ay ka soo baxaan xididada.
Sida loo abuuro Kalanchoe Pinnate, dhalmo ubax
Wareerinta ubaxkan uma baahna inay sameyso dadaalo gaar ah. Waxaa jira laba siyaabood oo dhalmo ah oo ah Kalanchoe Pinnate: miraha iyo qudaar ahaan.
Seeds oo bilawday beerashada laga bilaabo Febraayo ilaa Abriil. Isku daridda ciidda loogu talagalay miraha waa la qaadan karaa taas oo ku habboon cacti ama succulents, laakiin waa inaad ku dartaa ciidda naftaada.
Shinni lagu beeray ayaa loo baahan yahay in lagu daboolo filim cad. Xaaladda heerkulku waa inay noqotaa gudaha 21 ° C.
Waxa suurtagal ah in dhirta kudheerta gashato dheriyo yar yar ka dib marka ay leeyihiin 5 ama 6 caleemo.
Warshadda Kalanchoe Pinnate habka abuurka daaqsinka waa midka ugu fudud. Kaliya waa lagama maarmaan in xaashida dhulka la dhigo dhinaca gudaha gudaha ka dibna lagu rusheeyo lakab khafiif ah oo ciid ah (ilaa 2 cm).
Ka dib markaa, ciid waa in la qoyan yahay, ugu fiican oo lagu buufiyo. Sida kiiska habka abuurka ah, biqilka waa in lagu tallaalaa ka dib muuqaalka 5 ama 6 caleemo.
Noocyada kale ee Kalanchoe, sida Degremona, Kalandiva iyo Blossfeld, ayaa sidoo kale noqon kara qurxinta gurigaaga.
Noocyada daryeelka xanuunka Kalanchoe ee guriga
Kalanchoe pinnate uma baahna daryeelka xanuunka ee guriga. Waa in lagu dhejiyaa daaqad iftiin leh, heerkulku waa heerkulku waa qiyaastii 22 ° C xagaaga iyo qiyaastii 16 ° C xilliga jiilaalka. Waxay Blooms, sida caadiga ah, guga iyo xagaaga, laakiin waxay sidoo kale keeni kartaa ubax ee jiilaalka.
Tani, waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo qadarka iftiinka oo heerkulka ku hay 16 ° C. Wixii taajajir ah ka dib ubax ka dib waxaad u baahan tahay inaad jebiso ama jiido caleemaha.
Xilliga xagaaga, Kalanchoe waa in la waraabiyo si aad u badan, laakiin badanaa, ciidda waa in la qalajiyo si looga fogaado kallana on xididada. Ka waraabinta xilliga dayrta iyo jiilaalka waxaa la yareeyaa 1-2 jeer bishiiba.
Iyadoo la'aanta qoyaan, caleemaha waxay bilaabaan inay dhacaan, laakiin haddii ay jirto qoyaan badan, xoqan xididku wuxuu bilaabmayaa oo ubaxayaa. Wixii waraabinta ubax adigoo isticmaalaya biyo kala go'an heerkulka qolka.
Ma taqaanaa? Khudaarta cagaaran waxay hagaajinaysaa aragga.
Ubaxa wuxuu u baahan yahay beddelaad sanadle ah oo ciid ah, waxaa ugu wanaagsan in la beddelo guga. Muhiimaddu waa heerkulka carrada. Haddii ciidda ka weyn tahay, ka dibna xididdada dhirtu si liidata u nuugaan biyaha, taas oo sababa digaaga iyo dhimashada geedka. Si looga fogaado tan, xarumaha xun ee heerkulku waa lagama maarmaan, waxay ka sameysan karaan qoryo, xumbo, kartoon, iwm. Heerkulka ciidda, ku haboon dhirta, waxay u dhaxeysaa 10 ilaa 18 ° C.
Quudinta of feathery Kalanchoe
Dharka ugu sareeya sababta oo ah ubaxa waa cucus iyo Bacriminta succulent. Inta lagu jiro xilliga ubax, waa in la bacrimiyo si joogto ah, iyo xilliga qaboobaha waxaa si adag loo mamnuucay, marka laga reebo cudurka geedka. Waqtiga ugu fiican ee bacriminta - Ma tahay guga ama xagaaga. Tirada dharku waa inay ka yar tahay tan lagu tilmaamey xirmadda, nidaamka xididka waa in aan lagu darin wax lagu daro.
All ku saabsan transplanting Kalanchoe pinnate
Wixii dhalinyaro ah feathery feathery transplanting ayaa loo baahan yahay sanad kasta, sida ubaxa u koraa si dhakhso ah. Dhirta waayeelka ah waxaa lagu beeray dhacdada haddii dherigu noqdo mid yar. Waxaa ugu wanaagsan in dib loo dhigo dhammaadka guga, laakiin ma sameyn kartid muddada ubax. Laga bilaabo beerista, ubaxa waxaa laga saaraa dheriga, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la qiimeeyo xaalada xididada. Sababtoo ah xasaasiyadda xooggan ee qoyaanka, nidaamka xididkoodu wuxuu noqon karaa mid caaryar ama kallana. Haddii ay taasi dhacdo, xididdada ay saameysay waa inay ahaadaan u baahan tahay in laga saaro. Ka dibna waxaan ku shubi doonaa dheecaan ka sameysan dher cusub oo ku rusheeyaa dhulka. Kaliya ka dib markaa waxaan ku dhajinaynaa ubax halkaas oo lagu seexanayo ciidda, heerkulku waa inuu ahaadaa 1-2 cm ka hooseeya geesaha dheriga. Habka isdhexgalka ee dhirta wuxuu soconayaa illaa toddobaad.
Waa muhiim! Qalitaanka ka dib, geedka uma baahna in la waraabiyo.
Sida aan aragno, Kalanchoe ma dooran karo ee sii kordhaya, iyo joogitaanka guriga ubax this ka caawin doonaa daaweynta cudurada kala duwan sababtoo ah hantida faa'iido leh.